Hyper Scape Hacks acks Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Ufuna ukuqala ekuqaleni kweHyperscape ngokuklama ukunqoba ngokushesha? Bheka iHyperscape Aimbot, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil etholakala kithi lapha eGamepron!
Usuvele uthenge iHyperscape Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks wethu we-Hyperscape, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma liseseku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-Hyperscape Hacks
Hyperscape Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Thenga I-Hyperscape Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofanele ofuna ukukopela okuthembekile nokuphephile kukhathalogi ye-Gamepron.
Khetha ama-hacks asebenza nge-playstyle yakho bese unikeza usizo olufanele.
Yenza izinkokhelo zakho usebenzisa inqubo yethu yokukhokha ekhethekile ukuqinisekisa ukuphepha komsebenzisi.
Thola ukufinyelela kukhiye wakho womkhiqizo bese ulanda ama-Hyperscape Cheats ngemuva nje!
Kungani i-Gamepron Hyperscape hacks?
IHyperscape yisihloko esisha esakhiwe yi-Ubisoft, kanti abanye bathi “yinto enkulu elandelayo”. Kunemidlalo eminingi ethi iyinto enhle kakhulu selokhu isinkwa esisikiwe, yingakho abanye onjiniyela be-hack benqikaza uma kukhulunywa ngokuthuthukisa ukukopela iziqu ezintsha. I-Gamepron ayihlali nje ilwela ukukhipha ama-hacks emidlalo emisha sha, kepha sikwenza lokho ngaphandle kokuntengantenga kwekhwalithi. Noma ngabe sithuthukise ama-hacks ngokwethu noma sikufaka maqondana nabalingani bethu abaqinisekisiwe eSimplex, i-Gamepron inama-hacks aphezulu kakhulu we-Hyperscape oyohlangana nawo. Lokhu akukhona nje ukukhishwa kokuqala komdlalo futhi, njengoba sisebenza ubusuku nemini ukugcina konke ukuphamba kwethu kuvuselelwe!
I-Gamepron izokuvumela ukuthi uchume kuHyperscape, noma ngabe uyidlalile iBeta noma cha. Akudingeki ukuthi ube nethalente lemvelo abadlali bemidlalo ephezulu kakhulu phakathi nakho konke ukusakaza, ngoba ungathembela ekukhohliseni okutholakala eGamepron ukuze uthathe ukuxega. AmaGamers azofika ngazo zonke izinhlobo nobukhulu, kanye namazinga ekhono; asikwazi sonke ukuba ochwepheshe abachitha amahora beprakthiza. Noma ngabe awunaso isikhathi noma awufuni nje ukunikela ngempilo yakho kulokho kugaya, ukusebenzisa i-Hyperscape Cheats yakho konke okudingayo ukuncintisana nabadlali abahamba phambili beHyperscape emhlabeni jikelele.
Inani lezici ezitholakala kukho konke ukuphamba kwaGamepron kuningi, futhi abasebenzisi bethu bangafakazela lokho. Bayazi ukuthi ngokuvamile ubungeke ukwazi ukufinyelela kulezi zici eziningi zemidlalo eminingi ethandwayo, ingasaphathwa eyokuthi usanda kukhishwa! Noma ngabe kuzwakala kanjani ukuthi uyantula emnyangweni wamakhono kungabalwa ngakho, konke okumele ukwenze ukuthola ukufinyelela kuwo wonke amaHyperscape Hacks amangazayo atholakala eGamepron.
Sinikeza ukuthandwa kwe-Hyperscape Aimbot, kanye ne-ESP Hack ekuvumela ukuthi ubone zombili amamodeli ezitha nolunye ulwazi oluwusizo ngokusebenzisa izindawo eziqinile / ezi-opaque. Ungathatha lonke lolo lwazi oluwusizo bese unika amandla i-Hyperscape Aimbot, ngaleso sikhathi, sekuyisikhathi sokuya emsebenzini! Uma ufuna ama-Hyperscape Hacks athembekile angeke abeke ama-akhawunti akho engcupheni, i-Gamepron ukuphela komhlinzeki ongethembela ukukugcina uphephile. Hack ngokushesha futhi ngokuphepha ngokusebenzisa Hyperscape Cheats zethu!
Imininingwane yomdlali we-Hyperscape ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
Into ye-Hyperscape ESP enezihlungi
Izexwayiso zesixwayiso sesitha se-Hyperscape
Imodi ye-Hyperscape super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe).
Hyperscape bone & aim ukhiye okulungisekayo.
Isinxephezeli seHyperscape Recoil
Impela I-Hyperscape Hack Izici
Isidlali seHyperscape ESP
Isidlali sethu seHyperscape ESP silungele labo abangafuni ukushiya izinto ziye ethubeni, njengoba uzohlala wazi izitha ezicashe ekhoneni.
Lezo zitha kungenzeka zisebenzisa izikhali ezinamandla, kepha sibonga ukuthi i-Player Information ESP yethu uyimbozile (ikuvumela ukuthi ubone amagama abadlali, imigoqo yezempilo, nolunye ulwazi oluwusizo).
I-Hyperscape Item ESP enezihlungi ilungile kulabo abafuna izinto ezithile, njengoba ukwazi ukunika amandla isihlungi bese uzibona cishe noma kuphi.
IHyperscape Aimbot yethu efakwe ngokuphelele izokusiza ukuthi uwine imidlalo eminingi, njengoba ukulahlekelwa yizibhamu manje sekuyinto yesikhathi esedlule.
Ithrekhi ye-Hyperscape Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
Isici sethu se-Bullet Track sikuvumela ukuthi ulandelele ukuthi izinhlamvu zishaya kuphi, futhi ikuvumela ukuthi uthole ukuthi ungakanani umonakalo owenzayo (olungele ibanga elifushane neliphakathi nendawo).
Hyperscape bone & aim ukhiye okulungisekayo
Lungiselela i-Hyperscape Aimbot bese uyenza yenza noma yini ongayithanda, njengoba kunezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso (njenge-Bone Prioritization kanye ne-Instant Kill).
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-Hyperscape aimbot
IHyperscape Aimbot yethu nayo iza ifakwe isici se-Visible Checks, esilungele labo abafuna ukubona ukuthi (futhi kanjani) isibhamu sabo sinomthelela kumdlalo.
I-Recoil nayo iyinkinga ngenkathi usezimpini zezibhamu ngoba isikhali sakho ukweqa kancane kwesobunxele noma kwesokudla kungaba umehluko.
Umlayezo oyisixwayiso (ongawenza ngezifiso) uzovela esikrinini sakho noma kunini lapho isitha sihlose umlingiswa wakho noma sisondele ngokwanele ukukulimaza.
Imodi ye-Hyperscape super jump (akukho monakalo wokuwa lapho ucushiwe)
Imodi ye-Super Jump ikuvumela ukuthi wehle kusuka kunoma yikuphi ukuphakama ngaphandle kwempembelelo, njengoba ukulimala kokuwa kuyinto yesikhathi esedlule lapho uvule ama-Hyperscape Hacks ethu.
Yiba Umdlali Ohamba phambili weHyperscape ePlanethi
Kuthatha uhlobo lomuntu olukhethekile ukuhlala lapho futhi ucije amakhono abo ngezikhathi zamageyimu, ikakhulukazi labo abagxila kwiHyperscape. Uma uke wadlala i-Beta uyazi ukuthi umdlalo ubiza ini ngokuhlakanipha, futhi usuvele uyazi ukuthi ufuna ngenkani. Iya kumdlalo wakho wokuqala ngokuzethemba ngokuthola ukufinyelela kumaHackerscape Hacks wethu amangalisayo namuhla! Ngazo zonke izici ozidingayo, i-Gamepron izohlala iyindlela engcono kakhulu.
AmaHack Hyperscape adumile nokuphamba
IHyperscape ESP neWallhack
Amanye ama-Hyperscape Hacks nokukhohlisa
AmaHackers and Cheats athandwa kakhulu angatholakala khona lapha eGamepron, njengoba sizinikele ekunikezeni abasebenzisi bethu amathuluzi asebenza kahle futhi afanele kakhulu. Ngeke silokothe ​​sikhiphe ithuluzi ebelingalungele ukusebenzela umphakathi noma lelo elingahlangabezani nezinga lekhwalithi esizibekele lona. Kunesizathu sokuthi kungani abasebenzisi bethu beqhubeka nokubuyela kokunye, futhi kungenxa yokuthi asinikezi nje amaHyperscape Hacks namaCheat athandwa kakhulu - sinikeza amaHyperscape Hacks athembeke kakhulu ozowathola ku-inthanethi jikelele.
Ngezici namathuluzi amangalisayo afana neHyperscape Aimbot, NoRecoil, ESP, neWall Hack, awukho umphefumulo kulo Mhlaba ozokuzuzisa kakhulu eHyperscape. Bese futhi, ungahlangabezana nomunye umsebenzisi we-Gamepron, bese kuthi ngaleso sikhathi, isigebengu esihamba phambili siwine! Uma untula ukuzethemba nekhono ngenkathi udlala iHyperscape, amathuluzi wethu azokusiza ekushintsheni yonke indlela oyisebenzisayo.
Uma ungeke uthembele kumakhono akho wokukugcina uphila futhi uncintisana, kuhlale kuneHyperscape Aimbot yethu. Ungasebenzisa i-Hyperscape Aimbot kusuka ku-Gamepron ukuthola inzuzo enkulu kunabaphikisi bakho, njengoba uzobe ushaya isibhamu abacabanga ukuthi asinakwenzeka - futhi lokho kungenxa yokuthi mhlawumbe bekungeke kwenzeke, ukube awukaze usebenzise i-Hyperscape Aimbot yethu. Ungasebenzisa zonke izici ngaphakathi ukwenza ngezifiso isipiliyoni sakho, njengoba ukubeka phambili kwamathambo kuzokuvumela ukuthi yiziphi izindawo zomzimba ofuna ukuzikhomba. Ukubulala Okusheshayo kungavulelwa lapho ufuna ukuwina noma ngabe yini, ngokuchofoza okukodwa kwegundane lakho kuzokhipha isitha.
I-Hyperscape Aimbot yethu ibuye ibe ne-Smooth Aim / Fire, efanelekile kubasebenzisi abafuna ukugenca ngobuqili. Kuhle ngaso sonke isikhathi ukugenca ngobuqili, njengoba ukuzidonsela amehlo akuyona into engcono kakhulu ongayenza - yingakho iHyperscape Aimbot yethu ingcono kakhulu!
Izitha zakho zizozama konke ukukukhipha, futhi kwesinye isikhathi lokho kusho ukuthi zizosetha bese zizama ukukuheha. Kunabadlali abaningi abanobuqili okufanele bakhathazeke ngabo ngenkathi bedlala iHyperscape, kepha besebenzisa iHyperscape ESP neWall yethu Hack kuzokusiza ugweme noma yiziphi izinkinga ezingaba khona. Uzohlala wazi ngezindawo zesitha ngoba ungabona amaSkeleton ESP abo ngokusebenzisa izindawo eziqinile / ezi-opaque, futhi ungathola nokuthi umdlali uyingozi kangakanani ngokubheka ibha yabo yezempilo nokuthi unjani uhlobo lwamagiya. Umhlaba uyi-oyster yakho uma ususebenze i-Hyperscape ESP yethu, kumane nje kuyindaba yokuthi uzokwenzani ngala mandla.
Ungasebenzisa i-Hyperscape ESP yethu ukudlulisa imininingwane ebalulekile kozakwenu futhi ubasize nabo, okulungele lapho uhlela ukudlala nabangani (noma uzama ukuphatha ama-randoms).
Kukhona inketho ewusizo yanoma yimuphi umdlali ngaphakathi kweHyperscape Hack yethu, futhi lokho kufaka ukuthandwa kwesici sethu seFootprint. Ungabona lapho bekukhona isitha, nokuthi ziyaphi, ngokunika amandla isici seFootprint - ungavele ulandele imikhondo yezinyawo ebonakala esikrinini bese uthola ophikisana naye ekugcineni kwazo. Ukubhangqa lokhu eceleni kwesici seBanga kuzokuvumela ukuthi ungagcini nje ukulandelela izitha zakho kalula kepha futhi uthole nokuthi usondela nini nazo. Uma une-Hyperscape ESP enikwe amandla, akukho abangakwenza ukufihla! Kuyisikhathi nje ngaphambi kokuba ubakhiphe bese ubabamba phansi, noma uze unyonyobele ngemuva uwaqede ngesibhaxu esisheshayo.
Isici Sokulimaza Okukhulu siyazikhulumela, ngoba sizokuvumela ukuthi wenze umonakalo ongaphezulu kunabaphikisi bakho (kungakhathalekile ukuthi yiziphi izikhali abazisebenzisayo). Lesi sici singakuqinisekisa ukuthi ungaphezulu, noma ngabe isimo sinjani!
Kunezinye izici eziningi ezivelele okufanele zicatshangelwe, njengoba iHyperscape Hack yethu iyindlela ehlukahlukene kakhulu ebonwe yinoma ngubani. Sihlela nokuvuselela ngokungaguquguquki leli thuluzi futhi, ngakho-ke uzothola imiphumela emihle kakhulu uma ukhetha ukukopela ngeGamepron. Sinikeza izici eziningi abanye abahlinzeki abazibona zifanele isikhathi sabo, kepha sicabanga ukuthi ukungazibophezeli ekwenzeni okuhle. Kunesizathu sokuthi kungani sifake ukuthandwa kwe-Footprint, i-High Damage, ne-Distance feature, futhi lokho kungenxa yokuthi sifuna ukuthi ukwazi ukuthola usizo oluningi ngangokunokwenzeka. Ukukunikeza i-Hyperscape Aimbot ne-ESP kwakunganele i-Gamepron, sasifuna ukudlula ngaphezu kwalokhu abasebenzisi be-hack abakujwayele.
Uma ngabe uke wazibuza ukuthi yini esebenzisa i-Super Jump Mode noma i-Recoil Compensator yethu ekhethekile ezwakala sengathi, konke okumele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo futhi uthole ukufinyelela kokuphamba kwethu namuhla.
Ama-Hyperscape Hacks Imibuzo
Kungani iHyperscape Hacks yethu
AmaHackers wethu weHyperscape awafaniswa maqondana nekhwalithi, kepha futhi nokuphepha. Uma ufuna iHyperscape Hack engeke ibeke i-akhawunti yakho engcupheni futhi ilethe inqwaba yezici ongakhetha kuzo, akukho okuningi ongakucela! Lapho usuzamile ama-Hyperscape Cheats atholakala eGamepron, awusoze wabuyela komunye umhlinzeki we-hack.
Kungani iHyperscape Aimbot yethu
IHyperscape Aimbot yethu iza ifakwe zonke izici ezidingekayo ukulawula umncintiswano, kungakhathalekile ukuthi ngubani omi endleleni. Akunandaba ukuthi bebelokhu bedlala iHyperscape selokhu kukhishwe i-Alpha, ukusebenzisa iHyperscape Aimbot yethu kuyindlela eqinisekisiwe yokuqinisekisa ukunqoba. Ngezici ezifana ne-Instant Kill ukugcina izitha ezinzwaneni zabo, uzoletha amandla omlilo amaningi etafuleni noma ngubani ongaphatha.
Kungani iHyperscape ESP yethu
I-Hyperscape ESP elungile izokunikeza inzuzo enkulu ngokukwazisa ukuthi izitha zitholakala kuphi ngaphambi kokuthi bazi nokuthi ucathama emathunzini. Ungabona izitha ngezindawo eziqinile / ezi-opaque, kepha futhi ungabona imininingwane ewusizo (imigoqo yezempilo yomdlali, amabanga, amagama, njll.) Ngenkathi usebenzisa iHyperscape ESP yethu. Ungashiyi noma yiliphi itshe futhi uvule i-Hyperscape ESP yethu ukuze uzuze izitha zakho ngaphandle kwesimo.
Kungani iHyperscape Wallhack yethu
I-Wall Hacks ibilokhu ivelele selokhu ama-hacks aqala ukwethulwa emhlabeni wemidlalo yokudubula. Sebenzisa iHyperscape Wall Hack yethu ukuthumela izitha ekuqamekeleni, noma ngisho nokuthola nje ukuthi zisekelwe kuphi lezo zindawo ezinenkani. Izitha azikwazi ukufihla olakeni lwakho uma une-Hyperscape Wall Hack yethu isebenze, konke abangakwenza ukubambezela ukuphela kwabo okungenakugwenywa.
Kungani iHyperscape Norecoil yethu
Ukuthola kabusha kuyacasula kuwo wonke ama-shooter, futhi iHyperscape ibingeke yehluke. Uma usufe izikhathi ezimbalwa ngenxa yokubuyela esimweni, usuyalwazi usizi umuntu aluzwayo ngemuva kwalokho - ngokubonga, ungasebenzisa iRecoil Compensator etholakala ku-Gamepron ukugwema leyo nkinga. Ungadubula ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni manje, njengoba ukubuyela emuva kuyinto yesikhathi esedlule!
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-Hyperscape?
Ukulanda amaHack Hyperscape amahle kakhulu inqubo elula kakhulu lapho ukhetha ukukopela ngeGamepron. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo wokukhohlisa ofuna ukukufinyelela, futhi ngemuva kwalokho (uma indawo ivulekile) uzokwazi ukulanda ama-cheats bese uwasebenzisela ukubusa abaphikisi bakho. Mane ukhumbule ukuthi isikhathi sakho esilinganiselwe isikhathi eside kangakanani!
Kungani ama-Hyperscape hacks wakho ebiza kakhulu kunamanye
Ama-Hyperscape Hacks ethu abiza kakhulu uma kuqhathaniswa nenketho yendabuko, futhi kungenxa yokuthi akukho "okujwayelekile" mayelana nokukhohlisa kwethu. Uma uthenga ukhiye womkhiqizo ku-Gamepron, uthola ukufinyelela kumathuluzi atholakala kuphela - wonke angama-100% angatholakali. Tshala imali kumathuluzi akho futhi uqiniseke ukuthi uthola ama-hacks amahle kakhulu atholakalayo ngokuthenga ukufinyelela kuma-Hyperscape Hacks avela ku-Gamepron!
Kunemikhawulo yesikhathi etholakalayo ezohlangabezana nezidingo zanoma yimuphi umsebenzisi. Ungakhetha ukuthenga okhiye bomkhiqizo abakunikeza ukufinyelela kokuphamba kwethu nsuku zonke, masonto onke, nanyanga zonke; uthola ukulawula lonke ulwazi lwakho lokugenca lapho usebenza neGamepron. Asikuphoqi ukuthi uzibophezele kumaHyperscape Hacks ethu “isikhathi eside kakhulu”, kepha sikunikeza nezinketho ezinde.
Awesome I-Hyperscape Hack Izici